Global Voices teny Malagasy » Pakistan: Heverinao ve ny fangirifirian’ireo tra-boina tamin’ny tondra-drano? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Oktobra 2010 19:23 GMT 1	 · Mpanoratra Cindy Yang Nandika Lila
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Toekarena sy Fandraharahàna, Voina, Vonjy Voina
Angamba mety ho marina fa ny olona miteny anglisy dia manana fo antra manoloana ny firenena mahantra. Ohatra fotsiny ny praiminisitra britanika Nick Clegg izay nanambara tamin'ny 17 aogositra 2010  fa i Grande Bretagne dia nandray andraikitra lehibe teo amin'ny ezaka fanampiana ary ny valin-kafatra nomen'ny firaisam-be iraisam-pirenena dia “mahonena tanteraka”.
The Sound of Hope  (Feon'ny Fanantenana), fampielezam-peo iraisam-pirenena mpamokatra vaovao mahakasika an'i Azia, koa dia manaiky fa  i Grande Bretagne amin'ny maha firenena azy dia nanentana ny firenena hafa hanome fanampiana ho an'ny tra-boinan'ny tondra-drano any Pakistan.
Efa ao amin'ny aterineto sahady ny fomba fijery izay mandresy lahatra fa ireo izay “tokony” hanampy dia tsy ampy ny nomeny. Raha raisina ny voalaza tao amin'ny vaovaon'ny BBC hoe “Iza no hiraharaha an'i Pakistan ”, izay mametraka fa ny firenena Silamo dia tokony hanome bebe kokoa hanampiana an'i Pakistan.
Raha mihantsy ireo firenena rehetra amin'io resaka io ny fampahalalam-baovao, dia mpitoraka bilaogy Sinoa iray miaro  ny fireneny ao amin'ny bilaoginy:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/10/04/9385/
 izay nanambara tamin'ny 17 aogositra 2010: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1303457/Nick-Clegg-International-response-Pakistan-floods-absolutely-pitiful.html#ixzz0zyklEhtV
 The Sound of Hope: http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_of_Hope
 koa dia manaiky fa : http://big5.soundofhope.org/programs/162/167576-1.asp
 Iza no hiraharaha an'i Pakistan: http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11035270